राजनीतिक दल कुनै दर्शन, सिद्धान्त र विचारको आधारमा चल्छ, चल्नुपर्छ। एउटा दलले अर्काे दललाई हेर्ने, बुझ्ने आधार पनि सिद्धान्त र विचार नै हो। सङ्ख्याले कुनै दल सही र बहुमत जनताको पक्षपाती हुँदैन। सिद्धान्त र विचारको आधारमा दलले शत्रु र मित्र मानेको हुन्छ। राजनीतिमा मुख्य शत्रुविरुद्ध लड्न स–साना शत्रुका दलहरू मिल्छन् मिलेको पाइन्छ। निर्वाचनमा वर्गशत्रुलाई सजिलै जिताउनुहुँदैन। तर नेपालको राजनीतिक परिवेश नियाल्दा मित्र शक्ति हराउन, मित्र शक्तिलाई पाखा लगाउन आफ्नो मुख्य शत्रुसँग मिलिरहेको छ। मित्र शक्तिहरू मिलेर हराउनुपर्ने मुख्य शक्तिसँग घाँटी जोडेर पछि लागिरहेको पाइन्छसत्ता राजनीतिमा भुलेर। कहिले सरकारको नेतृत्व गर्न त कहिले सरकारमा सहभागी बन्न शत्रु दलसँग गठबन्धन भइरहेको छ। तिनै दलहरू भागबण्डामा अल्झेर मन्त्री, अन्य उच्चपदस्थ पद पाउन अवसरवादी राजनीतिमा भुलेको पाइन्छ। माओवादी केन्द्र सम्मिलित नेकाको वर्तमान सरकार यसको दृष्टान्त हो।
असोज २ गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि नेका र माओवादी केन्द्र मिलेर उम्मेदवारी दिने या पद बाँडफाँट गर्ने कुरा सार्वजनिक भएको थियो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल आफ्नो पक्षधर उम्मेदवार हारे मधेस हार्ने भनी फट्याइँ कुरा फलाक्दै छन्। कहिलेकाहीं ठूला दलका नेताहरू संविधान लागू गर्न र गराउन सबै दल सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने बताउँछन् र सरकारमा बढीभन्दा बढी सामेल गराउने कुत्सित प्रयास गर्छन्। यो सरकारको दृष्टिदोष हो। संविधान लागू गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका सबै दलहरू सरकारमा सहभागी हुनुपर्दैन। संविधान लागू गर्ने या नगर्ने भन्ने कुरा सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको हातमा भरपर्छ।
पहिले देउवाकै पालामा माओवादीले 'जनयुद्ध' छेडेको थियो। आमूल परिवर्तन ल्याउने आशा राख्दै त्यो 'जनयुद्ध' गरिएको हो। त्यसबेला 'युद्ध' को उद्घोष गर्ने नेताहरूको टाउकाको मूल्य तोक्ने प्रम देउवा नै हुन्। आफ्नै टाउकाको मूल्य तोक्ने नेकासँग अहिले माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार छ। यसरी आफ्नो दलको सिद्धान्तविपरीत माओवादी केन्द्र नेकासँग मिलेर सरकारमा गयो र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि लाग्यो। कम्युनिष्टको सिद्धान्त र विचार बोकेर पूँजीपति, जमिनदार र सामन्तहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने नेका सरकारसँग मिलेर किन गठबन्धन सरकार गठन भयो? के नेकासँग लागेर देशमा कम्युनिष्ट पार्टी बलियो हुन्छ? कम्युनिष्ट आन्दोलन अघि बढ्छ? कम्युनिष्टको सरकार गठन हुन्छ?